အလံမလဲ အောငျပှဲဆီသို့ ! – Myanmar Media
အလံမလဲ အောငျပှဲဆီသို့ !
မပူပါနဲ့ စကစဟာ နယျမွေ‌တှေ မွို့တှေ စလှတျရပွီဆိုတာနဲ့ ပွနျအရယူဖို့နဲ့ ပွညျသူကိုရကျစကျပွဖို့ ခုလိုပဲ ခငျြး ထနျတလနျ လှိုငျကျောတို့လို့ ဗုံးမိုးရှာပွီး ဖကျြစီးပွ အခွားနရောဒသေတှကေို လကျမလှတျစဖေို့ လုပျဆောငျလာပါလိမျ့မယျ
သဘောက ဆုတျရငျး ဖကျြစီး ခွောကျပွရငျး မရပွနျရမလား နောကျဆူံးအကှကျ သူံးနတောပါ ဒါကို ပွညျသူက ကွိတျမှတျခံ PDF တှကေ ရှိတဲ့အားနဲ့ အစှနျးကုနျတိုကျပွီး နယျမွစေိုးမိုး မွို့သိမျးဖို့အတှကျပဲ အရယူ ခြီတကျလာနသေောကွောငျ့
ဘာမှ လုပျမရတဲ့ စခမြား နောကျဆုတျရငျး နယျမွတှေေ လှတျရငျး ကရြှုံးရငျးနဲ့ အလယျပိုငျး မွပွေနျ့နဲ့ မွို့တှအေပျေါ ထိနျးခြုပျနိုငျဖို့ လုပျလာပါလိမျ့မယျ
သို့ဆိုရငျ ထိုနရောဒသေတှဟောလညျး အခြိနျမရှေး အခုလို စခမြားရဲ့ ဗုံးမိုးရှာခွငျးနဲ့ မွို့ပကျြမြား စဈဘေးမြားအဖွဈ မခြိနျမရှေး ဖွဈပျေါလာနိုငျသောကွောငျ့ ပွညျသူ နိုငျနသေမြှကာလပတျလုံး ထိုအဖွဈမြိုးမြားကနေ မလှတျပါဘူးဆိုသညျ့အတှကျ
ကနျြနသေေးသညျ့ အခွား မွို့ရှာ နရောဒသေ ပွညျနယျတှလေညျး အခု ထနျတလနျ လှိုငျကျောလို အခြိနျမရှေး ဖွဈ‌လာနိုငျကွောငျး စကစဟာ နယျမွကြေုံ့လာသညျနဲ့အမြှ လကွေောငျးကပဲ စဈကူထိုး ဖကျြစီးပွီး PDF မြား လကျအတှငျးသို့ မကရြောကျအောငျ ရသလောကျ ထိနျးခြုပျနကွေမှာဖွဈကွောငျး
ထိုအတှကျ မညျ့သညျ့မွို့ နရောမဆိုနဲ့ ရနျကုနျ မနျး မွို့ကွီးမြား၌လညျး မွို့သိမျးမြား ဆငျနှဲပါက ဖွဈပျေါ လုပျလာနိုငျကွောငျး အသိပေးရငျး ထိုအတှကျ အနညျးဆုံး ရှောငျလှဲနိုငျဖို့ဆိုရငျ
– လယောဉျပဈနဲ့ ဒရုနျးပဈမြား
– လတေပျစခနျးတှေ ဖကျြစီးနိုငျသော
– တာဝေးပဈတှေ ရရှိထားပွီး
လကျဦးခဖြေကျြထားနိုငျမယျဆို သကျသာမညျဖွဈပွီး ရနျသူကို ဦးခြိုးပွီး အလှယျတကူ ထိုးဖောကျစဈနိုငျပါကွောငျး အသိပေးရငျး ခုတောငျ မရှိတာနဲ့ နိုငျနတော ထိုအရာတှရှေိရငျ စခတသိုကျ မပွေးရငျ လာပါးရိုကျဟုသာ လောငျးကွေးထပျ အောငျပှဲကို ဈနျချေါခငျြသညျ
ပွညျသူ့ ဆာလောငျမှု လကျခမောငျး တဖွောငျးဖွောငျး ခတျသံနဲ့အတူ အရေးတျောပုံ အောငျရမညျဟု !
အလံမလဲ အောင်ပွဲဆီသို့ !
မပူပါနဲ့ စကစဟာ နယ်မြေ‌တွေ မြို့တွေ စလွှတ်ရပြီဆိုတာနဲ့ ပြန်အရယူဖို့နဲ့ ပြည်သူကိုရက်စက်ပြဖို့ ခုလိုပဲ ချင်း ထန်တလန် လွိုင်ကော်တို့လို့ ဗုံးမိုးရွာပြီး ဖျက်စီးပြ အခြားနေရာဒေသတွေကို လက်မလွှတ်စေဖို့ လုပ်ဆောင်လာပါလိမ့်မယ်
သဘောက ဆုတ်ရင်း ဖျက်စီး ခြောက်ပြရင်း မရပြန်ရမလား နောက်ဆူံးအကွက် သူံးနေတာပါ ဒါကို ပြည်သူက ကြိတ်မှတ်ခံ PDF တွေက ရှိတဲ့အားနဲ့ အစွန်းကုန်တိုက်ပြီး နယ်မြေစိုးမိုး မြို့သိမ်းဖို့အတွက်ပဲ အရယူ ချီတက်လာနေသောကြောင့်
ဘာမှ လုပ်မရတဲ့ စခများ နောက်ဆုတ်ရင်း နယ်မြေတွေ လွှတ်ရင်း ကျရှုံးရင်းနဲ့ အလယ်ပိုင်း မြေပြန့်နဲ့ မြို့တွေအပေါ် ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ လုပ်လာပါလိမ့်မယ်
သို့ဆိုရင် ထိုနေရာဒေသတွေဟာလည်း အချိန်မရွေး အခုလို စခများရဲ့ ဗုံးမိုးရွာခြင်းနဲ့ မြို့ပျက်များ စစ်ဘေးများအဖြစ် မချိန်မရွေး ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောကြောင့် ပြည်သူ နိုင်နေသမျှကာလပတ်လုံး ထိုအဖြစ်မျိုးများကနေ မလွတ်ပါဘူးဆိုသည့်အတွက်
ကျန်နေသေးသည့် အခြား မြို့ရွာ နေရာဒေသ ပြည်နယ်တွေလည်း အခု ထန်တလန် လွိုင်ကော်လို အချိန်မရွေး ဖြစ်‌လာနိုင်ကြောင်း စကစဟာ နယ်မြေကျုံ့လာသည်နဲ့အမျှ လေကြောင်းကပဲ စစ်ကူထိုး ဖျက်စီးပြီး PDF များ လက်အတွင်းသို့ မကျရောက်အောင် ရသလောက် ထိန်းချုပ်နေကြမှာဖြစ်ကြောင်း
ထိုအတွက် မည့်သည့်မြို့ နေရာမဆိုနဲ့ ရန်ကုန် မန်း မြို့ကြီးများ၌လည်း မြို့သိမ်းများ ဆင်နွှဲပါက ဖြစ်ပေါ် လုပ်လာနိုင်ကြောင်း အသိပေးရင်း ထိုအတွက် အနည်းဆုံး ရှောင်လွှဲနိုင်ဖို့ဆိုရင်
– လေယာဉ်ပစ်နဲ့ ဒရုန်းပစ်များ
– လေတပ်စခန်းတွေ ဖျက်စီးနိုင်သော
– တာဝေးပစ်တွေ ရရှိထားပြီး
လက်ဦးချေဖျက်ထားနိုင်မယ်ဆို သက်သာမည်ဖြစ်ပြီး ရန်သူကို ဦးချိုးပြီး အလွယ်တကူ ထိုးဖောက်စစ်နိုင်ပါကြောင်း အသိပေးရင်း ခုတောင် မရှိတာနဲ့ နိုင်နေတာ ထိုအရာတွေရှိရင် စခတသိုက် မပြေးရင် လာပါးရိုက်ဟုသာ လောင်းကြေးထပ် အောင်ပွဲကို စ်န်ခေါ်ချင်သည်
ပြည်သူ့ ဆာလောင်မှု လက်ခမောင်း တဖြောင်းဖြောင်း ခတ်သံနဲ့အတူ အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်ဟု !
Tagsအလံမလဲ အောငျပှဲဆီသို့ !
လှိုငျကျောတှငျ အကွမျးဖကျစဈတပျက ညအခြိနျ လကျနကျကွီးမြားဖွငျ့ ပဈ ခတျ (ရုပျ/သံ)